SAACADDA SADDEX-CALEEN: GURYAHA DAAWOOYINKA IYO CONTRAINDICATIONS, SHARAXAADAHA DHIRTA IYO KA KOOBAN KIIMIKADA, ISTICMAALKA IYO DIYAARINTA DHIRTA LAGA SOO - SOOSAARKA DALAGGA
Saacadda saddex-caleen: sifooyinka daawooyinka iyo ka hortagga
Guluubyada waaweyn iyo iftiinka saacadaha saddexda caleen waxay si cad u muuqanayaan fiidkii qoto dheer iyo xitaa habeenkii. Iyaga, sida haddii ay qaadaan feejignaan, waxay u digaan kuwa warwareeraha ah in ay jiraan biyo ama meel u dhow. Sidaa darteed, waxay ku magacaabeen warshad - watch.
Laatiin, magaca geedkaan wuxuu u eg yahay Menyanthes trifoliata L, daawooyinka - caleemaha trifoli (fibrini folium), iyo dadka dhexdooda - biyaha daadka, booburnis, watch caws, trehapnik, trifol, webiga lapushnik, qandho. Saacadda ayaa ah geed geedka cowska ah oo leh geed dheer, oo hindhisid, baaxad weyn, oo kicinaysa biyaha. Xididadu waxay sida caadiga ah gaartaa 15-30 cm oo dherer ah, iyada oo aan caleemo lahayn. At sare ee asliga ah waa ubax. Inflorescence lafteedu waxay u eg tahay burush cad oo leh dherer 3 illaa 7 cm oo leh ubax badan, oo kor u kaco caleemaha. Ubax trehlapnika leh shan faashad, casaan ah ee buro iyo caddaan - furay, dhexroor ah 2 cm, tufaaxa foosto la midoobaya a funnel. Miro waa sanduuq farabadan oo isku dhafan oo leh laba baal. Caleemaha cagaaran ee cagaaran caleenta waa mid aad u ballaadhan, dhalaalaya, saddexleey, iyo ballaaran. Waxay u muuqdaan guga horraanta, u dhinta dayrta goor dambe. Daaqsinta ubaxyada trifoli ee May iyo June, iyo midhaha bislaadaan July iyo August. Ku dhejinta, inta badan daaqsinka, wax yar ka yar - abuur iyo rhizomatous.
Baro wax badan oo ku saabsan daawooyinka noocaan oo kale ah sida: yarutka, socodka, korka, boodhka, cantalya, astragalus, dabeecada, boogaha, lespedeza, madaxa serpentine, sedge, bookfoot, pike, yasnotka iyo zubrovka.
Jihaadka khatarta ah wuxuu ku koraa koonfurta dhexe ee degaanka cimilada ee xasiloonida America, Europe iyo Aasiya. Waxaa laga helaa dhirta kaynta ee Belarus iyo Ukraine, kaymaha qaybta Yurub ee Ruushka, iyo sidoo kale Bariga Faro iyo Siberia. Waxay badanaa ku koraan aaladda iyo kuwa aan ka soo jeedin, xayawaanka, godadka, barkadaha, wabiyada iyo balliyada, qulqulatada qorraxda, biyo-socodka, aagagga keynta iyo keynta. Wuxuu jecel yahay xaafadaha leh soodhada, marshaxa marshaxanka, calla, dhoobada, iyo iyaga oo la wadaagaya awoodo inay sameeyaan sababo ballaadhan.
Halabuurka kiimikada ee dhirta waa mid hodan ku ah walxaha jidhka bini-aadanka ah ee caawiya in laga takhaluso xanuunka badan. Maadaama caleemaha oo keliya loo isticmaalo daawada, waxaa lagama maarmaan ah in ay ku noolaadaan kiimikadoodu si faahfaahsan. Waxay ku jiraan flavonoids, fitamiino C, P, B4, qadhaadh, carotene, iodine, phytosterols, foliamentin, fareeshiyada, alkaloids, ethane, methane, fosfooriga, hexadecanoic, oleic, linoleic iyo acannic acid.
Ma taqaanaa? Caleemaha Trifoli waxaa loo isticmaalaa sida qayb ka mid ah soo saaridda liishursyada iyo beedka dhadhan.
Maadooyinka ugu muhiimsan ee habka dheef-shiid kiimikaadka uu dhaco oo la xakameeyo, koritaanka iyo horumarinta trehlapnik waa glycosides qadhaadh. By kicinta digaagga ee xuubka xuubka ah ee carrabka iyo godka afka, glycosides si tartiib ah kor loogu qaado geedi socodka dheefshiidka, kicin cunto rabitaanka iyo kordhinta dheecaan of casiir gastric ah. Intaa waxaa dheer, dhirta this kordhisaa peristalsis ee caloosha iyo mindhicirada, waxay dhaqaajisaa dheecaanka of bile, muujinaysaa saameynta anti-bararka iyo caloolxumo. Sidoo kale trifol wuxuu awood u leeyahay inuu nadiifiyo lana nadiifiyo maqaarka.
Waqtiga fog, geed caleen ah ayaa loo qaaday sidii geedka sunta ah sababtoo ah qadhaadh. Xogta ugu horeysa ee isticmaalka bobovnik ee bogsashada ayaa iska leh wakhtiyada qarniyadii dhexe, iyo qarnigii XVII, macluumaadka ayaa ka muuqda isticmaalka dawooyinka kale. Maalmahan, warshadani waxay heshay codsiga ugu ballaaran ee daawada dhaqanka. Oral, geedka waxaa loo isticmaalaa qufaca iyo qaaxada sambabada, dhiig-baxa dhiig karka, giltritis leh acidit ka hooseeya caadada, sida wakiilka choleretic, oo qaba cudurro ee beerka iyo caleemaha, oo leh caloosha joogtada ah.
Saameynta Choleretka sidoo kale waxay leedahay dhirta sida: celandine, caashaq, frantranthus udgoon, cad cad, xayawaan, bjørk, johannesört wort, oxalis iyo arnica buur.
Dhirta waxaa loo adeegsadaa dibadda si ay u noqoto cudurada loo yaqaan "periodontal disease", "stomatitis", gingivitis, dhuunta catarrhal iyo boogaha trophic. Geedka waxaa loo isticmaalaa tinctures iyo isku dhajinta isku dhafka (sedative, choleretic). Isticmaalida adeegsigooda gudaha guriga: gogoska, qarqaryo qabow, dystonia neurocirculator. In daawada dhaqameed - sida daroogada si loo kordhiyo cunto xumo, laga bilaabo migraines, barar, qaba cudurrada beerka iyo gallbladder, cudurada faafa cudurrada faafa, duumada. Intaa waxaa dheer, dhirta tani waxay wax ku ool u tahay qalalaasaha wadnaha wadnaha iyo seddexleey.
Diyaargarowga ku salaysan dhirta (marka laga reebo khidmadda) waa la mamnuucayaa in la isticmaalo haddii aysidhka caloosha uu ka sarreeyo caadiga, oo leh hypertension, u nuglaanshaha badan ee iodine iyo dulqaad shakhsi ahaaneed oo ka mid ah qaybaha geedaha. Waa inaad ka fogaato inaad isticmaasho haweenka khatarta ah ee dumarka ah inta aad uurka leedahay iyo inta aad naas nuujineyso.
Diyaarinta alaabta ceeriin ah
Leaves waxaa la goostay ka dib markii dhirta uu ka jabay, taas oo ah, July iyo August, marka caleemaha koraan ciidan buuxda. Caleemaha yaryar iyo caleemaha korkiisa ma taabtaan - marka la qalajiyo, waxay noqon doonaan madow. Caleemaha waxaa loo qaabeeyey si khaas ah, iyaga waxaa la jarjarey qiyaastii 3 cm. Si loo ilaaliyo midabka caleemaha, qalajinta iftiinka asaasiga ah waxaa lagu fuliyaa hawada ee hooska. Wixii qallajin ah ee dambe, caleemaha waxaa loo wareejiyaa qolka qiiqa ama lagu dhejiyay qalajiyayaal khaas ah, alaabta ceeriin ah waxay ku faaftaa lakab khafiif ah, marmarna loo rogay, qalajiyey heerkul ah + 35-40 ° C. Dhammaadka habka qallajinta waxaa lagu go'aamiyaa heerka jilicsanaanta petioles iyo caleemaha waaweyn ee caleemaha. Xeerarka oo idil, caleemaha la dhammeeyaa waa inay ahaadaan cagaar, qufac, dhuuban, aan ur lahayn iyo qadhaadh dhadhan.
Waxyaabaha qashinka waxaa lagu keydin karaa meel qallalan oo aan la gaari karin iftiinka ugu badnaan laba sano.
Badanaa waxay sameeyaan diyaargarow ku salaysan periwinkle, ash buur, saliidda citronella, xayawaanka iyo hawada.
Diyaargarow ku salaysan saacadda saddexda caleen
Iyada oo ku saleysan saacada saddexda caleen, daawooyinka soo socda ayaa laga heli karaa:
"Trivalum" (diyaarinta isku dhafan ee dhirta);
Diyaarinta dhirta bogsashada
Qalabaynta bogsashada leh ee bobovnik waxaa lagu soo bandhigaa qaab tinctures, decoctions, shaaha, cadaadis, iwm. Aynu tixgelinno noocyada ugu caamsan iyo cuntada sida caadiga ah.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la isticmaalin daawooyinka daawooyinka leh warshadan ku jira qaybaha waa inay la tashadaan dhakhtarkaaga.
Recipe ee cabitaankan bogsashada waa mid aad u fudud. Ma aha wax adag in guriga lagu kariyo. Waxay qaadan doontaa 1 qaado oo ah caleemo cufan oo ah bobovnik iyo 200 ml biyo karkaraya. Caleemaha waa in la nadiifiyaa, ku adkee saacad iyo ciriiri. Cab cabirku waa inuu ahaado 3-4 jeer maalintii, 1/3 qaado oo cabbir ah. Waxay ka caawisaa neefta, neefta oo gaabis ah, qufac, qabow iyo si loo kordhiyo rabitaanka cuntada.
Faleebo kale waxaa loo diyaariyey sida soo socota: 1 qaado oo caleemo jajab ah ee bobovnik ku shub 0.5 koob oo biyo karkaraya. Loogu dhufto 1 saac iyo saddex jeer maalintii iyo 1 tbsp. l Wuxuu caawin doonaa cudurrada sambabada, qaaxada. Faleebo laga bilaabo cudurrada lakabada afka ayaa la diyaarin karaa haddii aad qaadato 2 tbsp. l shabaq soo jiidan, ku shub 200 ml oo biyo ah karkariyo, iyaga oo ka baxaya 40 daqiiqo, ka dibna cadaadis. Biyo raaci faleebo waa inay ahaato afka afka, haddii aad leedahay cirridka cirridka ama stomatitis, iyo angina catarrhal - gargle. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa kareemka sida daaweynta cudurrada maqaarka, boogaha aan wali lahayn bogsashada ama boogaha. Iyo faleebo kale oo qandho ah oo qandho ah. Qaado 1 qaado oo ah caleemo la jajabiyey ee geedka, ku shub 200 ml oo biyo ah karkaraya, ka tago saacad badh, ka dibna cadaadis. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo qiyaasta afar meelood oo afar jeer maalintii ka hor inta aan la cunin qaaxada sambabada, kaadiheysta iyo xanuunka beerka, cunto xumo, caloosha joogtada ah, gooryaanka iyo la'aanta fiitamiinada.
Ma taqaanaa? Biyaha tufaaxa waa geedka malab wanaagsan.
Diyaarinta tincture uma baahna dadaal badan, laakiin waxay ka duwan tahay wakhtiga diyaarinta ee faleebo. Qaado 40 g oo ah caleemo la jajabiyey oo ka buuxi hal galaas oo vodka ah (waxaad qaadan kartaa aalkolo qiyaas ahaan 1: 1). Cabsida macnaheedu waa labaatan maalmood, ka dibna cadaadis. Hel 10-15 dhibcood (ku dar biyo si galaas) saddex jeer maalintii. Tincture waxay kicisaa cuntada, waxay kicisaa beerka iyo beeryarada, waa daawada choleretic waxayna faa'iido u tahay gasritis-ka hooseeya. Doorasho kale waa sida tincture ah. 100 g caleemo cusub ku shub 1 litir oo vodka. Iska ilaali inaad u baahato 2 todobaad. Taas ka dib, xaji tincture iyo qaadashada 100 mg waqtiga hurdada qandho. Xanuunka laf-dhabarka ee rheumatic, waxaad sameyn kartaa tincture this. 400 ml oo ah vodka, qaado 2 qaado oo caleemo qallalan oo ah saacadda saddexda caleen. Ku adkeyso daroogada 2 asbuuc, ka dibna hubso inaad adkeyso oo aad u wareejiso weel cusub. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo tincture 4 jeer maalintii (ku dar 5 dhibcood oo galaas oo biyo ah) oo loo yaqaan 'rotatism', oo aad isticmaali kartid markaad xoqdo haddii dhabarkaagu uu ku xanuuno, xabadkaaga kuusoo jiido ama "jilbahaaga" jilbahaaga.
In diyaarinta maraqana, sidoo kale, ma aha wax adag. Waxay u fiicantahay qummanaanta hooseeya ee caloosha, beerka iyo xameetida kaadiheysta, qaaxada sambabada iyo la'aanta fiitamiin. Qaado 200 ml oo biyo ah iyo 10 g oo caleemo ah. Qubeyska qubeyska, ku hay qalabka mudo ah 15 daqiiqo, ka dibna ku adkee 45 daqiiqo. Markaas maraq waa in la sifeeyo. Si isku dar ah, ku dar 200 ml oo biyo nadiifa ah. Isticmaal milix ah 0.5 qaado oo saddex jeer ah maalintii nus saac ka hor cuntada. Faa'iidada udubka saddexda caleen ee jidhka bini'aadamka lama dhimi karo. Tan waxaa loo aqoonsan yahay daawo aan caadi ahayn oo rasmi ah. Haddii aad u isticmaasho warshadan adoo raacaya xeerarka qiyaasta iyo waqtiga koorsada, ka dibna waxay kuu keeni doontaa faa'iido!